Nin ay isu Eeg yihiin Ciyaaryahanka Caanka ah ee Lionel Messi oo Iran lagu xidhay | Berberanews.com
Home WARARKA Nin ay isu Eeg yihiin Ciyaaryahanka Caanka ah ee Lionel Messi oo...
Nin ay isu Eeg yihiin Ciyaaryahanka Caanka ah ee Lionel Messi oo Iran lagu xidhay
Hamaden(Berberanews):- Ciidammada Booliiska dawladda Iran, ayaa Xabsiga u taxaabay oo xidhay Arday reer Iiraan ah oo ay aad isugu eg-yihiin Ciyaaryahanka reer Argentine ee Lionel Messi.
Dad badan oo ku sugan magaalada Hamaden ee dalka Iiraan, ayaa doonayay in ay Sawirro la galaan Reza Parastesh, Booliiska, ayaana isaga iyo gaarigiisiiba geeyay saldhigga si loo joojiyo jahwareerka ka dhashay dad badan oo isugu soo arruuray Ninkan.
Mushkiladda ayaa billaabatay billooyin ka hor markii aabaha dhalay ninkan u eg Messi uu wiilkiisa ku qalqaaliyay in uu sawirro ku galo funaanadaha uu ku dheelo Messi ee ay dhabarka kaga qoran yihiin magaciisa iyo lambarka tobnaad ee uu ku dheelo.
Wiilkan 25 jirka ah, ayaa intaas ka dibna bilaabay in uu timaha u jarto sida Messi, Gadhkana uu sii daysto ama la baxo.
Wakaaladda Wararka ee AFP, ayuu u sheegay in ay hadda Dadku u arkaan in uu yahay Messi-gii reer Iiraan, isla markaana ay doonayaan in uu metalo waxkasta oo uu sameeyo. Marka uu meelahaas tagana ay Dadku aad u yaabaan. “Waan ku faraxsanahay in aragtidayda ay ku farxaan, farxaddaas ayaana dhiirigalin badan ka helaa”.
Warbaahin badan ayaa ka dalbatay in ay waraysi la yeeshaan, qandaraasyo xayaysiin dhar ayuuna helay. Waxaa kale oo uu sheegay in uu baranayo xeelado kubadeed si uu ugu sii ekaado Messi.
Previous article““Murashaxiinta qaarkood marka ay Maansoor joogaan waxa ay yidhaahdaan saldhiga waanu ka soo horjeednaa, marka ay..” Cirro
Next articleKalfadhigii 15aad ee Golaha Deegaanka Berbera oo furmay iyo ajandayaasha horaala-Daawo